ILufthansa: Ikhwalithi entsha, esimeme futhi ephezulu
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » ILufthansa: Ikhwalithi entsha, esimeme futhi ephezulu
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zaseJalimane • Izindaba • Ezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
ILufthansa imemezela ukusebenzisana nedini & david neDallmayr ngomqondo omusha wokudla
Ekwindla ka-2020, iLufthansa imemezele ukuthi maduzane izonikeza abagibeli be-Economy Class uhla lokudla neziphuzo ezisezingeni eliphakeme ukuze kuthengwe ezindizeni ezihamba kancane neziphakathi nendawo.
Inkampani yezindiza manje isithathe isinqumo ngozakwethu bokudla: Nge-dean & david, iLufthansa ikwazile ukunqoba inkampani esencane ye-gastronomy evela eMunich emele ukuvuselelwa, ikhwalithi kanye nomuzwa wokuba nomthwalo wemfanelo - ngokudla okunempilo, izithako ezisezingeni eliphakeme kanye nokudla okunomsoco kanye ukupakisha kwemvelo. Ukunikezwa okuphekwayo, okuzotholakala ezindizeni okungenani imizuzu engama-60, kuzoba yizinga eliphakeme futhi kugcwele okuhlukahlukene. IGate Gourmet, okuyisidlo esisha esikhulu saseLufthansa eYurophu, ilungisa izinto ezibalulekile zokwenza okunezinhlobonhlobo, njengamasaladi, izitsha, okusongekayo namasamishi, okusha nsuku zonke ngokusho kwezindlela zokupheka zedean & david. Imenyu ifaka isitsha se-salmon avocado, isaladi ye-falafel tahini, isitsha senkukhu esiphundu noma isangweji lenkukhu elimnandi le-chilli kanye neBirchermuesli esanda kwenziwa. Kuzoba khona ne- “Best of dean & david Boxes” enokhetho oluhle oluvela kwi-dean & david assortment.
Ukukhethwa kwemenyu kuzosizakala ngamakhono amakhekhe kanye nokudla okulula okuvela kwabanye abakhiqizi, njengama-crisps emifino. Izintengo zokudla nokudla okulula zingaba kusuka kwamabili kuya kuma-12 Euro. Ububanzi bemikhiqizo emisha buzobuyekezwa njalo ezinyangeni ezintathu.
Lufthansa izokwandisa ukubambisana kwayo osekuyisikhathi eside nenkampani yendabuko yaseMunich iDallmayr iziphuzo ezishisayo, i-confectionery kanye ne-patisserie specialties. Okugqamile kulokhu kufakwa yikhofi yephrojekthi iDano. Igama limelela indawo yokulima e-Ethiopia. IDallmayr isekela abantu bendawo lapho ngamaphrojekthi afana nokwakha isikole nokusungula ukubambisana kwekhofi. Ububanzi bomkhiqizo bupheleliswa yizinhlayiya ezahlukahlukene zemvelo, njenge-Alpine Herbs neFirst Flush Darjeeling, kanye nobisi lukashokoledi. Ngaphezu kwalokho, kuzophinde kutholwe noshokholethi abavela efemini yaseDallmayr praline nokukhethwa kwamakhekhe athile ngokubambisana neGate Gourmet.
Kuzoba khona nokukhethwa okukhulu kophuzo oludakayo nolungelona olotshwala. Ibhodlela lejusi yetamatisi noma ijusi lewolintshi, isibonelo, lizotholakala ngama-Euro amathathu, njengenkomishi yekhofi, ushokoledi oshisayo noma itiye. Ibhodlela lamanzi kanye nesimanga soshokholethi esincane kuzonikezwa mahhala.
Ukugxila kokunikezwayo okusha endizeni kusekhwalithi, ukuqabuleka nokusimama. UChristina Foerster, iBhodi Eliphethe Lufthansa Group Customer, IT & Corporate Responsibility, uyachaza: “Abalingani bethu umphathi & david noDallmayr bamele ikhwalithi evelele nezenzo ezinesibopho. Ngaphezu kokweneliseka kwezivakashi zethu, isihloko somthwalo wemvelo futhi sibaluleke kakhulu kithina. Sisebenzisa cishe izinto ezisimeme zokupakisha kwethu. Ngaphezu kwalokho, siqinisekisa ukuthi kudla okuncane okusaphazwa ngomkhiqizo onembe kakhudlwana. Siyajabula ukukwazi ukunikeza abagibeli bethu imikhiqizo emisha ezindizeni zaseYurophu ezinambitheka kamnandi. ”
Isipho esisha sokudla nesiphuzo esihlelelwe ukutholakala ezindizeni ezihamba kancane neziphakathi neLufthansa eziqala ngohlelo lwezikhathi lwasehlobo lowe-2021. Ama-oda azofakwa ngqo.